Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwayne Farmaajo oo Sacuudiga Sidiiran Loogu Soo Dhaweeyay.
Madaxwayne Farmaajo oo Sacuudiga Sidiiran Loogu Soo Dhaweeyay.
Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaadhay Boqortooyada Sucuudi Caraabiya halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa kamid ahaa Marwada kowaad ee Jamhuuriyadda, Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdisalaam Hadliye iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa ka degey garoonka diyaaradaha ee King Khalid International Airport magaalada Riyaadh waxaana garoonka ku soo dhaweeyey Faisal bin Bandar Al Saud, Badhasaabka gobolka Riyaadh iyo Wasiiru Dowlaha xukuumadda Dr. Mussaed bin Mohamed sida ay qortey SPA.
Kadib Boqorka ayaa wafdiga Madaxweynaha u sameeyey qado sharaf ay ka soo qaybgaleen qaar kamid ah qoyska Boqortooyada sida ay qortey Wakaaladda wararka ee Sucuudigu. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa lagu wadaa in uu tago magaalada Barakaysan ee Makka halkaasna uu ku cumraysto.